२०२१ मा अपनाउनु पर्ने उत्तम केश प्रत्यारोपण विधि के हो? - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2021B बजार समाचार
फेब्रुअरी 28, 2021 फेब्रुअरी 27, 2021 फराज बेग एशिया, एशिया फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, एशिया थोक र B2B, ब्लग, विशेष समाचार, पाकिस्तान, पाकिस्तान फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, पाकिस्तान थोक र B2B
कपाल हुनु र कपाल पातलो हुनुको परिणाम स्वरूप कपाल प्रत्यारोपण विधि सबैभन्दा लोकप्रिय उपचार हो।
प्रारम्भिक उमेरको तालुखुइले डिप्रेसन निम्त्याउँछ र व्यक्तिहरू भरपर्दो उपचारको खोजी गर्छन्।
यस लेखमा, हामी कपाल झर्ने र कपालको उपचारको लागि विभिन्न उपचारहरूको बारेमा छलफल गर्दैछौं र त्यसोभए तपाईले निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ कि २०२१ मा सबै भन्दा राम्रो कपाल प्रत्यारोपण विधि कुन हो।
एक DHI विधि विशेष रूपमा अन्य विधिहरू भन्दा बढी प्रभावशाली मानिदैन जुन यो FUE को परिमार्जन गरिएको संस्करण हो र पुरुष र महिलामा टाउकोको उपचार गर्न FUE जस्ता सम्भावना रहेको छ। यस विधिलाई पनि क्लिनिकहरूले अभ्यास गरेको हुन्छ फैसलाबादमा कपाल प्रत्यारोपण.
SUT कपाल प्रत्यारोपण के हो?
SUT कपाल प्रत्यारोपण एक नयाँ कपाल पुनर्स्थापना प्रविधिको हो जुन कुशल व्यक्तिले स्वचालित उपकरणहरूको मद्दतको साथ प्रदर्शन गर्दछ। कपालका फोलिकुलहरू दाता साइटबाट एक लेजर यन्त्रद्वारा हटाइन्छ, र त्यसपछि यी कपालका फलहरू स्थिर हुन्छन् र त्यसको पछि ट्याण्ड क्षेत्रमा हस्तान्तरण हुन्छन्। फ्रिजिंग प्रक्रियाको कारण, कपालका फुलहरू नष्ट हुँदैनन्।
उपचार स्थानीय एनेस्थेसिया प्रयोग गरेर गरिन्छ। यस उपचारको सब भन्दा राम्रो बिन्दु केहि अन्य प्रविधिहरूको तुलनामा कपाल फोलिकल्स को एक ठूलो संख्या दाता बाट प्राप्तकर्ता स्थान मा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ कि छ।
SUT कपाल प्रत्यारोपण एक नयाँ कपाल पुनर्स्थापना प्रविधिको हो जुन कुशल व्यक्तिले स्वचालित उपकरणहरूको मद्दतको साथ प्रदर्शन गर्दछ।
स्टेम सेल कपाल प्रत्यारोपण के हो?
स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट ज्यादै सामान्य हुँदैन। यस विधिमा, ठूलो संख्यामा कपालका फोलिकल्सहरू निकाल्ने छैनन् बरु छालाको सानो नमूना हटाइनेछ जहाँबाट कपालको फोलिकल्स हटाइन्छ। यिनीहरू प्रयोगशालामा दोहोरिन्छन् र अन्ततः स्कल्पमा राखिन्छन्। यस तरीकाले दुबै दाता क्षेत्र र प्रापक क्षेत्र कपाल बढाउनको लागि सक्षम छन्।
पंच बायोप्सी प्रक्रिया पूरा गर्न स्टेम सेलहरू निकाल्न प्रयोग गरिन्छ।
रक्तस्राव र संक्रमण बाहेक स्टेम सेल कपाल प्रत्यारोपणको सम्भावित साइड इफेक्टहरूमा प्रक्रिया साइट मुनि नर्भ वा धमनी क्षति समावेश छ।
FUE कपाल प्रत्यारोपण विधि के हो?
FUE Follicular यूनिट एक्स्ट्र्यासनको लागि खडा हुन्छ। FUT कपाल प्रत्यारोपण विधिमा, बिरामीको कपालको फोलिकुलहरू हटाइन्छ र कम कपाल वा टक्कड क्षेत्रको साथ टाउकोमा ट्रान्सफर हुन्छ। यो विधि अधिक प्रमुख हुँदै गइरहेको छ र अधिक बिरामीहरू द्वारा अपनाईन्छ। यो संक्रमणको विरल जोखिम सहित पूर्ण रूपमा सुरक्षित विधि हो। यो स्थानीय एनेस्थेसिया र उपचार पश्चात पीडा राहत पिलिसको कारण पीडादायी छैन।
यसका साथै, यस रिकभरी पनि द्रुत छ र १० दिन भन्दा बढि यसले तपाईंलाई आफ्नो दैनिक कामकाजहरू पुनःसुरु गर्न लिनेछ।
पछिल्लो कपाल प्रत्यारोपण प्रविधि
भर्खरको कपाल प्रत्यारोपण प्रविधि २०२१ मा माथि उल्लिखित प्रविधिहरू बाहेक नियोग्राफ्ट कपाल प्रत्यारोपण समावेश गर्दछ।
एक निओग्राफ्ट टेक्निक सब भन्दा उन्नत प्रविधि हो, यसलाई FUE को अर्ध स्वचालित संस्करण भन्न सकिन्छ। NeoGraft प्रक्रिया एक सक्सन डण्ड संग कपाल follicles हटाएर काम गर्दछ। फोलिकल्स सम्मिलित गर्न यो विधिमा सजिलो छ किनभने छुट्टै चीराहरू यसको सट्टामा अद्वितीय उपकरण चीराको सहायताले बनाउँदैन र फसलहरू सँगै गरिन्छ।
संसारमा सब भन्दा राम्रो कपाल प्रत्यारोपण FUE उपचार को रूप मा मानिन्छ, यो जोखिम मुक्त छ र यसले ठूलो दाग पैदा गर्दैन। यसको फलस्वरूप सन्तोषजनक र पूर्ण प्राकृतिक हो। यसबाहेक, यो प्रारम्भिक सफल उपचार हो। तपाईं सस्तो हुन सक्छ रावलपिंडीमा कपाल प्रत्यारोपण, उत्तम सुविधाका साथ पाकिस्तान।
सांप्रदायिक समाचार कपाल प्रत्यारोपण लाहोरमा कपाल प्रत्यारोपण पाकिस्तानमा कपाल प्रत्यारोपण
मलाई मेरो ब्लगको लागि लेख्न मन पर्छ र म बिभिन्न शीर्षकहरू समेट्छु जसमा मनोरन्जन, गाडी, यात्रा, स्वास्थ्य र अन्य धेरै समावेश छन्।